के तपाई महिलाहरु भन्दा क्रस ड्रेस सफा भएको रहस्य जान्न चाहानुहुन्छ? क्लिक गर्नुहोस्, म तपाईंलाई भन्नेछु। - टेक्निकल जानकारी - शेन्जेन नोबल स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड
के तपाई महिलाहरु भन्दा क्रस ड्रेस सफा भएको रहस्य जान्न चाहानुहुन्छ? क्लिक गर्नुहोस्, म तपाईंलाई भन्नेछु।
समय: 2020-11-26 हिट्स: 3
"क्रस ड्रेस" शब्द मूल रूपमा एनिमेबाट आएको हो, तर बिलीबिलीको जोरदार प्रचार र हालका बर्षहरूमा स्वयं-मिडिया प्लेटफर्मको विकासको साथ। अधिक र अधिक व्यक्ति यी शब्दहरू र व्यक्तिसँग पनि सम्पर्कमा आउन थालेका छन्। विशेष गरी प्रत्यक्ष प्रसारण र टिकटोकले क्रस ड्रेस केटहरूको समूह बनाइसकेको छ, धेरै प्रख्यात सीसी, जुआन मो र मेरो मनपर्ने एबिली सहित। एबीको अनुहार, शरीर, र लामो खुट्टा मा हेर्दा, यो कल्पना गर्न गाह्रो छ कि ऊ वास्तवमा एक मान्छे हो। तर चिन्ता नलिनुहोस्, म अझै पनि वास्तविक मानिस जस्तै नै छु। यद्यपि यो सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ कि पुरुषहरू कपालमा सामान्यतया कपालमा बढी जोडदार हुनुपर्दछ, कम कपाल भएको पुरुषहरू भए पनि। तर त्यहाँ धेरै क्रस पोशाक केटाहरू छन्, यो असम्भव छ कि तिनीहरू मध्ये सबैको कपाल छैन, विशेष गरी पुरुष माध्यमिक यौन विशेषताहरू, दाह्री। त्यसोभए उनीहरूले कसरी रेसमको छाला कायम राख्छन्।
अत्यन्त चिकना छालाको एक मान्छे देखेर तपाईं ईर्ष्यालु पनि हुन्छ। उनीहरूको आफ्नै शरीर अवस्थाको अतिरिक्त वास्तवमा धेरै राम्रो छ, तिनीहरूको सबैभन्दा ठूलो रहस्य भनेको होम फोटोन कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग गर्नु हो। यस उत्पादनले उनीहरूको कपाल मात्र पूर्ण रूपमा हटाउन सक्दैन, तर छाला कायाकल्प र सौन्दर्य प्रभावहरू पनि छन्। राम्रो नतीजाहरू प्राप्त गर्नका लागि, केवल कपाल हटाउने उपकरण मात्र आवश्यक पर्दैन, तर सही प्रयोग चरणहरू पनि आवश्यक छन्।
एक: शारीरिक कपाल हटाउने
उपकरण प्रयोग गर्नु अघि, पहिले शारीरिक रूपमा हटाइएको क्षेत्रमा कपाल हटाउनुहोस्। छालाको दृश्यात्मक सतह हटाउन केवल सेभिंग चक्कु प्रयोग गर्दै। यद्यपि दुई बुँदाहरूलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। १. छालाको सतहमा कपाल हटाएपछि छाला सफा हुनै पर्छ र छालामा कपालको केही अंश वा तेल हुँदैन। २. यदि तपाईंको छाला विशेष गरी संवेदनशील छ भने, शारीरिक कपाल हटाए पछि लालिमा देखा पर्नेछ। यसलाई रिहाइड्रेट गर्न र छालाको सामान्य रंगमा फर्किनको लागि कुर्नु सिफारिस गरिन्छ, वा अर्को दिन सम्म प्रतीक्षा गर्नुहोस् त्यसपछि कपाल हटाउन उपकरणको प्रयोग गर्नुहोस्।
दुई: उर्जाको तीव्रता समायोजित गर्नुहोस्
सामान्य घर कपाल हटाउने उपकरणहरू छनौट गर्न धेरै ऊर्जा स्तरहरू हुन्छन्, यसलाई न्यूनबाट प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ। यदि त्यहाँ प्रकाश हुँदा कुनै असुविधा छैन, तपाईं ऊर्जा वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। जति धेरै उर्जा, कपाल हटाउने प्रभाव राम्रो छ। एउटा सानो रिमाइन्डर, प्रकाश कार्यहरू गर्नु भन्दा पहिले गग्गल लगाउन सम्झनुहोस्। यद्यपि सुन्दरताको जरुरीता बुझिन योग्य छ, तपाईंले आफ्नो आँखाको सुरक्षा पनि गर्नुपर्छ।
तीन: कपाल हटाउने
छालालाई कमजोर पार्दा, तपाईले विभिन्न कपाल हटाउने भागका अनुसार फरक प्रकार्यहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। सामान्यतया, घरको कपाल हटाउने उपकरणहरूमा म्यानुअल र स्वचालित मोड हुन्छन्। सामान्यतया, म्यान्युअल मोड स्थानीय क्षेत्रमा कपाल हटाउन प्रयोग गरिन्छ, जस्तै गाल, दाह्री, औंला, अन्डरआर्म, आदि। हतियार, फिला, बाछा, आदि को लागी, यो स्वचालित प्रकाश मोड को उपयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। सुझाव: बाक्लो कपालको कारणले उही भाग प्रकाश नलगाउनुहोस्। बारम्बार उही भागको प्रकाशले छालालाई हानी गर्दछ। केवल उही भागमा एक पटक चक्र मा हिर्काउनुहोस्, यसलाई २- 2-3 पटक चक्र सिफारिस गरिन्छ।
चार: उपयोग देखभाल पछि
उपकरणले काम गर्दा गर्मीको ठूलो मात्राको कारण, छालाका केही भागहरू प्रयोग पछि रातो बन्छन्। यो पूर्ण सामान्य हो। यो सिफारिश गरिएको छ कि तपाइँ चिसो पानी कुल्नु (यदि सम्भव भएमा बरफ) प्रयोग गर्नुहोस्, र त्यसपछि केही मोइस्चराइजिंग लोशन प्रयोग गर्नुहोस्। नोट: केश हटाउने क्षेत्रमा रसायनिक युक्त उत्पादनहरू, सेतो बनाउने उत्पादनहरू र सौन्दर्य प्रसाधनहरू प्रयोग नगर्नुहोस्।
पाँच: प्रयोगको फ्रिक्वेन्सी
१-२ हप्ता: हप्तामा दुई चोटि प्रयोग गर्नुहोस्
Weeks-। हप्ता: हप्तामा एक पटक
.-5 हप्ता: प्रत्येक दुई हप्तामा एक पटक प्रयोग गर्नुहोस्
स्थिरीकरण पछि, कपाल हटाउने प्रभाव मजबूत गर्न मासिक एक पटक प्रयोग को फ्रिक्वेन्सी कायम गर्न कोशिस गर्नुहोस्।
क्रस ड्रेस केटहरूको सफलताको सानो रहस्यले तपाईंलाई पहिल्यै बताइसकेको छ। कृपया मलाई लेई फen्ग कल गर्नुहोस्। पर्खनुहोस्, कृपया सम्झनुहोस् कि हामी घरका कपाल हटाउने उपकरणहरू - नोबल स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड को एक पेशेवर निर्माता हो।
अघिल्लो: कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग पछि के प्रभावहरू छन्
अर्को: फ्रिजिंग पोइन्ट डिपिलिटर कसरी प्रयोग गर्ने？